Qaabka Hogaaminta Kaniisada, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Madaxa kiniisadda waa Ciise Masiix. Wuxuu kaniisadda ku muujiyaa doonista Aabbaha kaniisadda Ruuxa Quduuska ah. Iyadoo loo marayo Qorniinka, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu baraa oo u sahlaa Kaniisada inay u adeegto baahiyaha jameecooyinka. Kaniisadda Adduunyada ee Ilaah waxay ku dadaaleysaa inay raacdo tilmaamaha Ruuxa Quduuska ah ee ilaaliya jameecooda iyo sidoo kale magacaabidda odayaasha, wadaaddada iyo hoggaamiyaasha. (Kolosay 1,18: 1,15; Efesos 23-16,13; Yooxanaa 15-4,11; Efesos 16)
Maaddaama ay run tahay in Masiixi walba leeyahay Ruuxa Quduuska ah oo Ruuxa Quduuska ah uu ina farayo midkeen kasta, ma u baahan tahay hagitaan kaniisadda dhexdeeda? Miyayna ahayn wax Masiixi ah inaynu isu aragno sidii koox isle'eg, oo qof walbaa karti u leeyahay door kasta?
Aayado kala duwan oo Baybalka ah, sida 1 Yooxanaa 2,27, ayaa umuuqda inay xaqiijinayaan fikirkaan - laakiin waa haddii laga saaro macnaha guud. Tusaale ahaan, markii uu John qoray in Masiixiyiintu aysan u baahnayn cid wax bara, ma wuxuu u jeedaa inaysan iyagu isaga barin? Miyuusan dheg jalaq u siinin waxa aan qorayo maxaa yeelay uma baahnid aniga ama qof kale oo macalin ah? Dabcan taasi kama uusan jeedin taas.
Yooxanaa warqaddan ayuu u qoray waayo dadkaasi waxay u baahdeen in wax la baro. Wuxuu uga digay akhristayaasheeda wax ku saabsan Gnosticism, caqiidada ah in badbaadada lagu gaari karo barista sirta ah. Wuxuu sheegay in runtada diinta masiixiga mar horeba kaniisadda dhexdeeda lagu yaqaanay. Rumaystayaashu uma baahna inay ogaadaan wax qarsoon oo dhaafsiisan waxa Ruuxa Quduuska ahi hore uugu keenay kaniisadda. Yooxanaa ma uusan sheegin in Masiixiyiintu ay sameyn karaan hoggaamiyeyaal iyo macallimiin la'aan.
Masiixi kasta wuxuu leeyahay mas'uuliyaad shaqsiyadeed. Qof walba waa inuu rumeeyaa, go'aan ka gaaraa sida loo noolaado, go'aan loo gaaro waxa la rumeysan karo. Laakiin Axdiga Cusubi wuxuu caddeeyay inaannaan ahayn shakhsiyaad keliya. Waxaan qayb ka nahay beel. Kaniisaddu waa ikhtiyaar iyadoo isla dareenka ah in mas'uuliyaddu tahay ikhtiyaari. Eebbe ha noo doorto waxaan doorano. Laakiin taasi micnaheedu maahan in xulasho kasta inay si isku mid ah u caawinayso annaga ama qof walbaa u siman yahay doonista Ilaah.
Masiixiyiintu ma u baahan yihiin macallimiin? Axdiga Cusubi dhammaantiis waxay ina tusaysaa inaan u baahan nahay. Kaniisadda Antiyokh waxay lahayd macallimiin mid ka mid ah xilalka hoggaamineed (Falimaha Rasuullada 13,1).
Macallimiintu waa mid ka mid ah hadiyadaha uu Ruuxa Quduuska ah siiyo kaniisadda (1 Korintos 12,28:4,11; Efesos). Bawlos wuxuu isu yeedhay macallin (1 Timoteyos 2,7; Tiitos 1,11). Xitaa sannado badan oo iimaanka ka dib, rumaystayaashu wali waxay u baahan yihiin macallimiin (Cibraaniyada 5,12). James wuxuu ka digay in qof walba macallin yahay (Yacquub 3,1). Hadalkiisa ayaa muujinaya in Kaniisadda inta badan ay lahaan jireen dad wax bara.
Masiixiyiintu waxay u baahan yihiin barid caafimaad leh runta rumeynta. Eebbe waa ogyahay inaan ku korayno xawaareynno kaladuwan isla markaana leh xooggeenna meelaha kala duwan. Wuu ogyahay maxaa yeelay isagu waa kii ina siiyay awoodahan markii ugu horaysay. Isagu ma siiyo dadka oo dhan hadiyado isku mid ah (1 Korintos 12). Wuxuu si badan u kala qaybiyaa si aan uga wada shaqeyno wanaaga guud, is caawinta midba midka kale intii laga go'doomin lahaa arrimahana aan gaarno (1 Korintos 12,7).
Masiixiyiinta qaar ayaa karti badan u leh inay muujiyaan naxariis, qaar u kala soocnaan xagga ruux ahaaneed, qaar xagga jir ahaan ugu adeega, qaar u waano, waxbarid, ama wax bar. Masiixiyiinta oo dhami waxay leeyihiin qiimo isku mid ah, laakiin sinnaanta micnaheedu maahan inay isku mid ahaadaan. Waxaa nala siiyay xirfado kaladuwan, iyo in kasta oo ay dhammaantood muhiim yihiin, dhammaantood maahan isku mid. Inagoo ah carruurta Ilaah, iyo kuwo dhaxla badbaadada, innaguba waa isku nahay. Si kastaba ha noqotee, kulligeen isku wada mid ma nihin iskuulku. Ilaah wuxuu adeegsadaa dadka wuxuuna u qaybiyaa hadiyadihiisa sidii uu rabay, ee maaha sida ay dadku fileysiiyaan.
Markaa Ilaah wuxuu adeegsadaa macallimiinta kiniisadda dhexdeeda, dadka awooda inay caawiyaan kuwa kale inay wax bartaan. Haa, waxaan qirayaa in annaga oo ah hay'ad adduun, aan had iyo jeer u dooran kuwa ugu kartida badan, waxaan kaloo qirayaa in macallimiintu mararka qaar khaladaad sameeyaan. Laakiin taasi ma dhumineyso maragga cad ee Axdiga Cusub ee ah in Kaniisadda Ilaah ay dhab ahaantii leedahay macallimiin, in tani ay tahay kaalin aan ka filan karno mujtamac rumaystayaal ah.
In kasta oo aanaan haysan xafiis noo gaar ah oo la yiraahdo "macallimiin", waxaan fileynaa inay macallimiin ka yihiin kaniisadda; waxaan fileynaa in wadaadadeennu ay yaqaanaan sida wax loo baro (1 Timoteyos 3,2: 2; 2,2 Timoteyos). Efesos 4,11, Bawlos wuxuu wadaaddada iyo macallimiinta u qaybiyaa hal koox, isagoo naxwa ahaan ugu yeeraya sidii hawshani u leedahay laba masuuliyadood: daaq iyo waxbaris.
Axdiga Cusubi ma qorayo hoggaan hoggaamin gaar ah u leh Kaniisadda. Kaniisadda Qudus waxay lahayd rasuullo iyo odayaal. Kaniisadda ku taal Antiyokh waxay lahayd nebiyo iyo macallimiin (Falimaha Rasuullada 15,1:13,1;). Aayadaha qaar ee Axdiga Cusubi waxay ugu yeeraan hoggaamiyeyaasha odayaasha, qaar kalena waxay ugu yeeraan wakiillo ama kiniisado, qaar waxay ugu yeeraan wadaaddo (Falimaha Rasuullada 14,23:1,6; Tiitos 7: 1,1-1; Filiboy 3,2: 13,17; Timoteyos; Cibraaniyada). Kuwani waxay u muuqdaan inay yihiin ereyo kala duwan oo isku shaqo ah.
Axdiga Cusubi ma qeexayo kala saraynta rasuullada, nebiyada, wacdiyayaasha, wadaadada, odayaasha, wadaadada, iyo xubnaha xubnaha ka ah. Ereyga "ku saabsan" ma noqon doono kan ugu fiican si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay kuwani waa dhammaan howlaha adeegga ee loo abuuray in loogu adeego kaniisadda. Axdiga Cusub, si kastaba ha noqotee, wuxuu dadka ku boorinayaa inay adeecaan hoggaamiyeyaasha Kaniisadda, inay la shaqeeyaan hoggaankooda (Cibraaniyada 13,17). Addeecid la'aanta ma aha mid ku habboon, ama shaki weyn ama iska caabin.
Bawlos wuxuu sharraxayaa hoggaamiye fudud markuu u sheegay Timoteyos inuu u magacaabo odayaasha kiniisadaha. Rasuul ahaan, aasaasaha kiniisadda iyo lataliyaha, Bawlos waxaa kor loo qaaday Timoteyos, isaga dhiniciisuna, Timothy wuxuu lahaa awood uu ku go'aansado cidda noqon lahaa oday ama wadaad. Laakiin tan waa tilmaantii Efesos, shardi kuma aha dhammaan ururada kaniisadaha mustaqbalka. Ma aragno dadaal aan ku xidhno kaniisad kasta oo ku xidha Yeruusaalem ama Antiyokh ama Rooma. Taasi waxay noqon laheyd wax aan macquul aheyn qarnigii ugu horreeyay si kastaba ha noqotee.
Marka maxaa laga dhihi karaa kaniisada maanta jirta? Waxaan dhihi karnaa inuu Eebbe ka rajeynayo Kaniisadda inay lahaato hoggaamiyeyaal, laakiin isagu ma uusan cayimin waxa loo baahan yahay in loo yeero hoggaamiyeyaashan ama sida loo qaabayn karo. Faahfaahintaas ayuu u furay si ay ula qabsadaan duruufaha is beddelaya ee Kaniisadda lafteeda ku hesho. Waxay ahayd inaan lahaano hogaamiyayaal kaniisadaha maxalliga ah. Laakiin macno ma leh waxa loogu yeedho: Wadaadka Pierce, Oday Ed, wadaad Matson, ama midiidinka kiniisadda Sam ayaa laga yaabaa inay si la mid ah loo aqbali karo.
Kaniisadda Dunida ee Dunida, duruufaha jira awgeed, waxaan u adeegsanaa waxa lagu magacaabi karo "hoggaanka" hoggaaminta hoggaaminta (Ereyga episkopal wuxuu ka yimid ereyga Griiga ee loo yaqaan kormeerka Episkopos, oo mararka qaar loo tarjumay inuu yahay wadaad u yahay). Waxaan u aragnaa in tani ay tahay sida ugu wanaagsan ee bulshooyinkeenu u heli karaan baritaan caafimaad iyo xasillooni leh. Qaabka hoggaankeenna suuxdinta leh wuxuu leeyahay dhibaatooyinkiisa sida moodooyinka kale, maxaa yeelay dadka ay ku tiirsan yihiin dhammaantood way dhici karaan. Waxaan aaminsanahay marka loo eego duruufaha taariikhdeena iyo juqraafi ahaan, qaab dhismeedkeena wuxuu u adeegi karaa xubnaheena si ka wanaagsan kan koongareeska ama hanashada hogaaminta ee Presbyterian.
(Maskaxda ku hay in dhammaan moodellada hoggaaminta kaniisadda, ha ahaadeen kuwa golaha ka tirsan, kuwa loo yaqaan 'Presbyterian' ama 'episcopal'), ay u qaadan karaan qaabab kala duwan. Qaabka noocan ah ee hoggaanka loo yaqaan 'episcopal hoggaanka' episcopal hoggaanka ayaa si weyn uga duwan kan Kaniisadda Orthodox-ka ee Bariga, Anglican, Kaniisadda Episcopal, Kaniisadda Roman Catholic ama Kaniisadaha Lutheran).
Madaxa kaniisaddu waa Ciise Masiix dhammaan hoggaamiyeyaasha kiniisadda waa inay ku dadaalaan inay doonistiisa wax walba ka doondoonaan, noloshooda gaarka ah iyo nolosha kiniisadaha. Hoggaamiyeyaashu waa inay u dhaqmaan sidii Masiixa oo kale shaqadooda, taas oo ah, waa inay ku dadaalaan inay caawiyaan kuwa kale, ee ayan ahayn inay naftooda ka faa'iideystaan Kaniisadda maxalliga ahi ma aha koox hawleed ka caawisa wadaaddada inay shaqada qabtaan. Taa bedelkeed, wadaadka wuxuu u shaqeeyaa sidii kafaala-qaade oo xubnaha ka caawiya shaqadooda - shaqada injiilka, shaqada ay tahay inay qabtaan sida Ciise sheegayo.
Waayeellada iyo hoggaamiyeyaasha diinta
Bawlos wuxuu kaniisadda u barbar dhigayaa xubno leh xubno badan oo kaladuwan. Midnimadiisa kuma eka midnimo, laakiin waa in si wada jir ah loogu wada shaqeeyo ilaah iyo ujeeddo guud. Xubnaha kaladuwan waxay leeyihiin xoogag kaladuwan waana inaan u adeegsanaa danta dadka oo dhan (1 Korintos 12,7).
Kaniisadda Adduunka ee Ilaah waxay u xilsaartaa odayaasha lab iyo dheddig inay noqdaan hoggaamiyeyaal xoola-dhaqato ah. Waxa kale oo ay u magacaabaan hoggaamiyeyaal rag iyo dumar ah oo wakiil ah (kaas oo sidoo kale loogu yeedhi karo wadaadada).
Waa maxay farqiga u dhexeeya "ammin" iyo "wakiil"? Guud ahaan, xil-wareejintu waa mid guud oo joogto ah. Wakiil ayaa loo samayn karaa si gaar ah ama guud oo si fudud ayaa looga noqon karaa. Awoodaha qareenku waa kuwa aan rasmi ahayn oo si otomaatig ah looma cusbooneysiin karo ama lama wareejin karo. Amarka sidoo kale waa laga noqon karaa, laakiin tani waxay ku dhacdaa oo keliya kiisaska aan caadiga ahayn.
Kaniisadda Adduunyada ee Ilaah ma lihin qeexid dhammaystiran oo hoggaamiye kasta oo kaniisadda ka mid ah. Odeyaasha badanaa waxay u adeegaan sidii wadaaddada kaniisadaha (wadaad sare ama kaaliye). Intooda badan waxay wacdiyaan oo wax bartaan, laakiin dhammaantood maahan. Qaar ayaa ku takhasusay maamulka. Qof kastaa wuxuu ku shaqeeyaa kormeerka wadaad weyn (kormeeraha qaybta isbitaalka ama wejiga) marka loo eego kartidiisa.
Hogaamiyayaasha adeega kaniisada waxay ka tarjumayaan xitaa kala duwanaansho weyn, qof walba (waxaan rajeyneynaa) iyadoo loo eegayo awoodda ay ugu adeegto baahiyaha bulshada. Wadaadka mas'uulka ka ah wuxuu u oggolaan karaa hoggaamiyeyaashaas howlo kumeelgaar ah ama muddo aan xad lahayn.
Wadaadku waxaay u dhaqmaan wax sida lamid ah orchestra. Cidna kuma khasbi kartid inuu ku ciyaaro fekerka, laakiin waxay u dhaqmi karaan sidii hagitaan iyo isku-duwayaal. Kooxda guud ahaanba waxay qaban doontaa shaqo aad ufiican haddii ciyaartoydu adeegsadaan calaamadaha la siiyay. Degmadeena, xubnaha kama cayrin karaan wadaadka. Wadaadada waxaa la soo xulay lagana eryaa heer gobal, oo ay kujirto maamulka kaniisada ee wadanka Mareykanka, ayagoo kaashanaya odayaasha bulshada deegaanka.
Maxaa dhacaya haddii xubin ka mid ahi u maleeyo in wadaadku karti leeyahay ama uu dhumiyo idanka? Halkani waa meesha qaab-dhismeedka hoggaamiye-kooxeedyadu uu ka yimaaddo. Dhibaatooyinka waxbarista ama hoggaaminta waa in marka hore lagala hadlaa wadaaddada, ka dibna hoggaamiye dhaqameed (kormeeraha ama wadaadka degmada).
Sida ay jameecahu ugu baahan yihiin hoggaamiyeyaasha maxalliga ah iyo macallimiinta, wadaadadu waxay u baahan yihiin hoggaamiyeyaal iyo macallimiin. Taasi waa sababta aan u aaminsanahay in xarunta dhexe ee Kaniisadda Dunida ee Ilaah inay door muhiim ah ka cayaareyso u adeegidda jameecooyinkayaga. Waxaan ku dadaalnaa inaan u adeegno il ka mid ah tababbarka, fikradaha, dhiirrigelinta, kormeerka iyo iskuduwidda. Dhab ahaantii annagu kaamil ma lihin, laakiin tan waxaan u aragnaa inay tahay xirfadda nala siiyay. Waa runtii waxa aan hiigsaneyno.
Indhaheenu waa inay Ciise saarnaadaan. Isagu shaqo buu inoo leeyahay howlo badanna durba waa la qabtay. Aynu ku ammaano samirkiisa, hadiyadihiisii ​​iyo howsha wax ku kordhisa kobacayaga.